Echiche nke obere ozi ozi bụ inweta ndị a ma ama karịa ka ọ dịtụrụla mere na akụkọ ihe mere eme nke na ekwentị mkparịta ụka. Ọ na-eme atụmatụ na ihe 3 na 5 ndị ​​zipụ SMS iji onye ọ bụla n'ụbọchị. Nke a na-agwa gị mkpa nke SMS n'ụwa taa. Ma ajụjụ bụ, olee otú anyị pụrụ ndabere ozi ederede na weghachite gbanwere SMS karịsịa ikpe ebe ị nwere dochie gị android ma ọ bụ IOS igwe na-enweghị adịkwa ha. Isiokwu a na-aga anya na nzọụkwụ nke sms nkwado ndabere na mpaghara weghachite.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite SMS na Wondershare MobileTrans
Ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-na-upgrading ngwaọrụ gị ma ọ na-agbanwe agbanwe kpamkpam na-na ngwaọrụ ọzọ elu na agbụ. Wondershare MobileTrans Na-enye ihe ngwọta dị mfe maka sms nkwado ndabere na mpaghara weghachite dị nnọọ otu Pịa. Ọ dị mkpa ka haa ebe a na ọ bụ nchebe iji na posses dịghị ize ndụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Ọzọkwa, e weghachiri eweghachi ozi-abịa dị ka ndị mbụ ya ka ị ghara mkpa ka nchegbu banyere alterations.
Mbụ, anyị nwere ike ikwu na ị wụnye MobileTrans ngwa na kọmputa gị.
1. ndabere ozi ederede na kọmputa
Lee ndị nzọụkwụ nke otú ndabere ozi ederede na kọmputa na otu Pịa.
Nzọụkwụ 1: Pịa Back Up ekwentị gị na Homepage iji bugote ndabere Ohere
Nzọụkwụ 2: ikwunye na a USB jikọọ ekwentị na kọmputa. The Wondershare MobileTrans pụrụ ịkwado ma iOS na Android ngwaọrụ na ga-ntabi-achọpụta rụọ na ekwentị na akọrọ data ọ ike kwado ndabere.
Hụ na ị untick niile ndị ọzọ na ọdịnaya na-ahapụ nanị ozi ederede ticked na pịa Malite Detuo. Nke a ga-amalite ndabere gị SMS ozugbo ruo mgbe ọ gị niile ozi na-kụziri n'elu MobileTrans.
2. Weghachi SMS Site A ndabere File
Nzọụkwụ 1: Gaa Back ka Weghachi si ndabere na Home Page.
Nzọụkwụ 2: Pịa na Weghachi si ndabere na-esi tinye weghachi window
Nzọụkwụ 3: Jiri a USB na-ekwentị gị Jikọrọ gị na kọmputa
Nzọụkwụ 4: Pịa na MobileTrans na akara ngosi na mbubata ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 5: Họrọ Text Ozi na Họrọ si ndabere File na Pịa Malite Copy
Nzọụkwụ ndị a ga-eweghachi gị niile SMS kwadoo na MobileTrans ọhụrụ gị na ekwentị ma ọ bụ android ma ọ bụ onye IOS ngwaọrụ.
Atụmatụ maka Mma Ijikwa SMS na android na iOS.
N'agbanyeghị nke ọ bụla nwere ike ịbụ, omenala ụdị ederede ozi ma ọ bụ Short ozi ọrụ SMS bịa a ogologo ụzọ na ụwa nke nkwurịta okwu. Ọ pụrụ inwe ihe ịma aka nye ọrụ dị ka ebe nchekwa ọkọkpọhi zuru ma na-ahazi SMS-aghọ a nsogbu. Otú ọ dị, anyị na-aga depụta ụfọdụ Atụmatụ maka ijikwa SMS mma na gị android ma ọ bụ IOS.
1. Ihichapụ Old Ozi akpaghị aka.
Nke a bụ nnọọ akụkụ dị mkpa nke ijikwa SMS na gị ama. Nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ebe nchekwa ekwentị gị ga--zuru na-ekwe omume igbochi abata ozi aghọ onye dị adị. Ndị kasị mma nhọrọ ebe a bụ ka ihichapụ ochie ozi-akpaghị aka. Ndị ochie ozi ga-họọrọ site Smartphone ọrụ na onye setịpụrụ na a ụzọ onye ọrụ chọrọ. Ka ihe atụ, android na IOS nwere otu nhọrọ nke ihichapụ gị ochie ozi na-akpaghị aka ozugbo igbe mbata gị ruru ka a ụfọdụ larịị. Ị na-adịghị na-ahụ otu ihichapụ ha otu otu. Ihe ị chọrọ ime na ebe a bụ n'ịgbanwe ekwentị gị ntọala. Gaa na ntọala nke gị SMS na ekwentị gị n'okpuru izugbe ntọala. Chọọ maka Nhichapụ ochie ozi igbe na ego ya. Mgbe ahụ, setịpụrụ SMS ókè .I nwere ike ịtọ ịgba na-200 ozi ederede ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị na-ya na-achọ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị ịtọ ịgba na 200 SMS, ihe na-eme bụ na, dị ebe nchekwa ekwentị gị na-enweta ruo 200 ozi, ọ na-akpaghị aka deletes ndị okenye ozi na ekwentị gị si otú ahụ meghee ozi gị ohere. Na nke a, ebe nchekwa gị nwere ike ịbụ zuru ruo n'ókè nke ịkwụsị ị site na ịnweta ozi. Lee otú ihichapụ kpam kpam iPhone ozi.
2. Iji nzipu Akụkọ.
WhatsApp nwere a abụọ ego nke na-egosi na-esote ederede mgbe a ozi e zigara. Nke a na-egosi na ozi e zigara na WhatsApp. Olee banyere ihe SMS? Ijikwa nnyefe akụkọ nke gị SMS gị android ma ọ bụ IOS ngwaọrụ bụ kwa ike. Dị nnọọ aga ngwa ntọala na n'okpuru subcategory nke SMS, e nwere nnyefe akụkọ igbe, dị nnọọ nne Mmetụta ya. Na nke a, ị ga na-esi a ngosi mgbe gị zitere ozi na-natara site onye nke ọzọ.
3. Isetịpụ Up Automatic Response.
N'ọnọdụ ka ukwuu, a na-eme site na iji a ọzọ ngwa. Otu n'ime ndị dị otú ahụ ngwa bụ Auto SMS. Ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ n'ihi nzube a na nwere ike ibudata n'ihi na free Google play ụlọ ahịa. Ozugbo ibudatara na arụnyere na gị na android ngwaọrụ, i nwere ike iji na akpaaka azịza atụmatụ. Ihe atụ, mgbe a na nzute, ị nwere ike ịgbalite atụmatụ na-egosi "Abụ m na a nzukọ, m ga-akpọ gị mgbe e mesịrị". Na-mara na ebighị n'ihi na nke a mma bụ ihe dị dị mfe dị ka ịpị na gbanyụọ bọtịnụ na ntọala.
4. usoro ihe omume ihe SMS.
E nweghị ụzọ ka mma isi jikwaa eziga SMS karịa na iji usoro ihe omume nhọrọ gị android na IOS ngwaọrụ. Ka ihe atụ, ị chọrọ ịbụ onye mbụ izipu ụbọchị ọmụmụ chọrọ gị enyi kasị mma, unu niile chọrọ ime bụ ka ịtọọ oge ya na 12am mgbe ị na-ehi ụra. Dị nnọọ pịnyere ozi, gaa na nhọrọ, họrọ oge na ndenye ụbọchị na oge. Ọ na-eziga ya na-akpaghị aka mgbe oge ruru. Lee top sms schedulers ebe a.
Top 6 SMS ezo ngwa kpuchido nzuzo gị
> Resource> Top List> Otu Pịa na nkwado ma weghachite Ma iOS na Android SMS